चलचित्र 'लाखे' भदौ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने,के भन्छन निर्माता ? - चलचित्र 'लाखे' भदौ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने,के भन्छन निर्माता ? -
चलचित्र ‘लाखे’ भदौ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने,के भन्छन निर्माता ?
काठमाडौ । चलचित्र ‘लाखे’ का निर्माता डिबि बम्जनले आफुले एक्का ट्रायल लिएर आएको बताएका छन । ” एक्का ट्रायल लिएर आकोछु, बासा ट्रायल त अरु संग नि हुन सक्छ ।” उनले भने ।
चलचित्र ‘लाखे’ भदौ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । महंगो बजेटमा निर्माण गरिएको बताइने चलचित्रमा सौगात मल्ल, आर्यन अधिकारी, अनुप बिक्रम शाही, वर्षा राउत, सुशील सिटौला, अर्पण थापा, प्रशान्त ताम्राकार, रोहित रुम्बा, सन्जोक राणा, रक्षा बुढाथोकी, कालु राना र बाल कलाकार सिस्टम भण्डारी मुख्य भूमिकामा छन् । गणेश मल्ल ठकुरी (जिएम) को प्रस्तुति रहेको चलचित्रको कथाकार र निर्माता सिजन अर्याल र सह निर्माता डि.बि बम्जन हुन् । सुसन प्रजापतिले खिचेको चलचित्रमा गीतमा दीपक बज्राचार्यको संगीत छ ।
हरि मल्ल ठकुरी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रका निर्देशक सम्राट बस्नेत हुन् । ग्लोवल मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर र औरियन प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको पटकथा र सम्वाद आकाश बरालले लेखेका हुन ।